एडिडास (कम्पनी) - विकिपीडिया
एडिडास एजी (Adidas AG) FWB: ADS) खेलको सामान र कपडा बनाउने वाला एक जर्मन कम्पनी हो, यो एडिडास समूहको मूल कम्पनी हो, जसमा खेलको साज सामान बनाउने वाला कम्पनी रेबुक, गल्फ कम्पनी (एशवर्थ सहित) र रोकपोर्ट शामिल छन्। खेलको जुताहरूको वाहेक, कम्पनी अन्य उत्पादनहरूको निर्माण पनि गर्छ जस्तै ब्याग, शर्ट, घडिहरू, चश्माहरू र खेल एवं कपडा सँग सम्बंधित अन्य सामान। यो यूरोपमा खेलको सामान बनाउने सबै भन्दा ठूलो कम्पनी हो, र संसारमा आफ्नो अमेरिकी प्रतिस्पर्धी नाइक पछि खेलको सामान बनाउने दोस्रो सबै भन्दा ठूलो कम्पनी हो।
एडिडासको स्थापना 1948मा एडोल्फ "एडी" डास्लरको द्धारा गरिएको थियो। यसको स्थापना गेब्रदर डास्लर शूफ्याब्रिक र उनको ठूलो भाइ रुडोल्फको बीचमा विभाजन भए पछि भएको थियो। रुडोल्फले त्यस पछि प्यूमाको स्थापना गरे, जुन प्रारंभमा एडिडासको प्रतिद्वंद्वी थियो।
1949मा दर्ता, एडिडास वर्तमानमा प्यूमा सँग जर्मनीको हरजोनाउराचमा स्थित छ।
कम्पनीको कपडाहरू र जुताहरूको डिजाइनमा सामान्यतया तीन समानांतर लाइन हुन्छन्, र त्यहि प्रतिरूपलाई नै एडिडासको वर्तमान अधिकारिक मान्छेहरूमा पनि शामिल गरिएको छ। "तीन धर्काहरू"को 1951मा फिन्निश खेल कम्पनी कार्हू स्पोर्ट्स सँग किनिएको थियो। कम्पनीको राजस्व 2009को लागि €10.38 बिलियन सूचीबद्ध गरियो र 2008को लागि € 10.80 सूचीबद्ध गरियो।
१.१ गेब्रदर डास्लर शूफ्याब्रिक (Gebrüder Dassler Schuhfabrik)
१.२ कम्पनीको विभाजन
१.३ टैपी मामला (The Tapie affair)
१.४ टैपी पछिको समय
२.१ रनिंग (दौड)
२.२ फुटबल (सकर)
२.११ सहायक सामग्रियां (एक्सेसरीज)
३.१ खेल विज्ञापन
३.२ प्रायोजन (स्पसरशिप)
४ कर्पोरेट जानकारी
४.१ मौजूदा कार्यकारी बोर्ड
४.२ पूर्व प्रबंधन
४.३ वित्तीय जानकारी
गेब्रदर डास्लर शूफ्याब्रिक (Gebrüder Dassler Schuhfabrik)[सम्पादन गर्ने]
एडिडास सांबा फुटबल प्रशिक्षकहरूको एक जोडी
एडोल्फ "एडी" डास्लरले प्रथम विश्व युद्ध बाट फर्कनु पछि हरजोनाउराच, बाभरियामा आफ्नो आमाको भान्सामा आफ्नो आफुको खेलको जुता बनाउन शुरू गर्‍यो। 1924 मा, उनको भाइ रुडोल्फ "रूडी" डास्लर पनि उनको एस व्यापारमा शामिल भए, जुन Gebrüder Dassler Schuhfabrik (डास्लर ब्रदर्स शू फैक्ट्री ) बन्यो र खूब फल्यो अनि फुल्यो। यस जोडीले आफ्नो आमाको लन्ड्रीमा आफ्नो उद्धम शुरू गरेका थिए,:5 तर उनी समय शहरमा बिजुलीको आपूर्ति भरोसेमंद स्थितिमा थिएन, र यिनी भाइहरूलाई कहिले काँही आफ्नो उपकरणहरूलाई चलाउनको लागि एक स्टेशनरी साइकिलबाट पैडलको पावरको प्रयोग गर्नु पर्थ्यो.
1936को ग्रीष्मकालीन ओलम्पिकमा एडी डास्लर संसारको पहिले मोटर मार्गको यात्रा गर्दै ओलम्पिक भिलेज सम्म आए। उनी आफ्नो साथ स्पाइकहरू बाट भरिएको एक सूटकेस पनि ल्याएका थिए, उनले अमेरिकी धावक जस्ता ओवेन्सको यिनीहरूका प्रयोग गर्नको लागि राजी गराए, यो एक अफ्रीकी अमेरिकीको पहिलो स्पोन्सरशिप थियो।
दौडमा ओवेन्सले चार स्वर्ण पदक जीते, यसपछि संसारको सबै भन्दा प्रसिद्द खेलाडिहरूको बीच डास्लरको जुताहरूको प्रतिष्ठा धेरै बढ गयी. दुईटै भाइहरूको डेस्कमा दुनिया भरमा पत्र आउन लागे, र सबै अन्य राष्ट्रीय टीमको प्रशिक्षक उनको जूतहरूमा रूचि लिन लागे.कारोबार जोडसँग अगाडी बढयो र डास्लर बंधु द्धितीय विश्व युद्धले �